Toamasina : VAHOAKA ANALINY MANOHANA NY FILOHA -
AccueilRaharaham-pirenenaToamasina : VAHOAKA ANALINY MANOHANA NY FILOHA
Raha toa ka amin’ny kongresy ataon’ny Hvm no fotoana hivoahan’ny fanambarana fanohanana ny filohampirenana, dia tsy aritr’ireto vahoakan’I Toamasina ( tamin’ny alalan’ny solontenany) ireto ny hetahetany te hanohana ny Filoha. Noho izany dia tsy nanaiky raha tsy naneho ny heviny ny solontenan’ny vahoaka amin’izay fanohanany izay.“ Matoky ny Filoham-pirenena izahay. Mametraka ny fanambinay aminy. Efa hitanay ny tetikasam-pampandrosoana ataony. Efa niaraha-nahita ny miliara de dolara nomen’ny mpamatsy vola azy. Tsy vita anatin’ny roa taona ny asa rehetra, ka dia mampanantena izahay fa ao an-damosin’ny Filoham-pirenena », hoy i Roméo Jean Pierre solontenan’ny vahoaka. Noho ny taona vaovao dia tonga nifampiarahaba tratry ny taona niaraka tamin’ny vahoakan’i Toamasina I sy II ireo mpikambana rehetra avy ao amin’ny HVM ao Toamasina notronin’ireo solontena avy amin’ny faritra hafa . Teny amoron-dranomasina no nanatanterahana izany ny alahady 22 Janoary lasa teo. Olona manodidina ny iray alina mahery no tonga tamin’izany. Nanolotra omby miisa folo ny Filohampirenena mba ho mariky ny nofonkena mitam-pihavanana sy ho fanamafisana ny firaisankina.
Sambany no nisian’ny fety be tahaka izao tamin’ity taona vaovao ity. Nisolontena ny filohampirenena tany an-toerana moa ny minisitra maromaro notarihin’ny minisitra Narson Rafidimanana, Joanita Dahimananjara, sy Paza Didier. Niditra antsehatra nifanosona tamin’ireo vahoaka mihitsy moa teto ny minisitra Narson Rafidimanana. Nilatsaka nizara ny sakafo sy ny nofon-kena mitam-pihavanana tamin’ireo vahoaka ny tenany. Izy rahateo moa no minisitra mpiahy an’iny faritra Atsinanana iny. Mitondra ny tenin’ny filohampirenena Hery Rajaonarimampianina ihany izahay no eto, hoy izy. “Iraky ny filoham-pirenena izahay ary mahafaly anay sy nataonay an-tsitrapo no nitondra ireo artista maro sy nanome sakafo ho an’ny vahoakan’i Toamasina. Namono omby maromaro izahay, ary nitondra izao fahafinaretana izao , ho azy ireo . Napetraky ny Filoham-pirenena hoe anjaranay no manompo ireo vahoaka fa tsy tompon’izy ireo izahay, ka izay no antony nahatonga ny hoe izahay mihitsy no nizara sakafo sy nandray an-tanana azy ireo.”, hoy izy. Vao fisantarana ihany moa ireo zava-bita ireo, hoy izy, fa mbola maro ny programan’asa hapetraky ny Filohampirenena ao Toamasina amin’ity taona 2017 ity.